अन्तर्वार्ता – Page2– Himalaya Television
कोरोनाको दोश्रो लहरको जोखिम कस्तो छ ? बच्न के गर्ने ? – डा. शेरबहादुर पुन (भिडियो )
२४ चैत २०७७ काठमाडौं । देशभर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । विज्ञले यसलाई संक्रमणको दोस्रो लहरको संकेत भनेका छन् । संक्रमण किन बढेको हो र यसबाट जोगिन के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ ? सरकार र आमनागरिकले के गर्नु...
ओलीसँग मिलेर जाने सम्भावना न्युन रहेको एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीको प्रष्टिकरण (भिडियो कुराकानी)
१८ चैत २०७७ काठमाडौं । नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले अव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जाने सम्भावन निक्कै न्यून रहेको बताउनु भएको छ । हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा कुरा गर्दै नेता ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री समेत...
ओली पक्षले किन बोलायो बालुवाटारमै संसदीय दलको बैठक (भिडियो कुराकानी)
१३ चैत २०७७ काठमाडौं । एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले बालुवाटारमा बैठक नबोलाउन भने पनि संस्थापन पक्षले आजका लागि बालुवाटारमै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । नेपाल–खनाल पक्षले केन्द्रीय सदस्यको बैठका बोलाएको चार घण्टापछि अध्यक्ष ओली पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएको...
नेकपा एमाले नेता योगेशलाई प्रश्न : नेपाल-खनाल समूहको बैठकमा के हुन्छ ? (भिडियो कुराकानी)
नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले भोलिका लागि बोलाएको बैठकमा के विषयमा छलफल हुन्छ त ? पार्टी सचिव समेत रहेका उक्त समूहका नेता योगेश भट्टराईसँग हामीले आज कुराकानी गरेका छौं ।
भीम रावल भन्नुहुन्छ–स्पष्टिकरण दिनु जरुरी छैन, त्यो पत्र अवैधानिक छ (भिडियो रिपोर्टसहित)
९ चैत २०७७ काठमाडौं । ओली समूहले नेपाल–खनाल समूहलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि नेकपा एमालेको विवाद थप पेचिलो भएको छ । नेपाल–खनाल समूहले स्पष्टीकरण अवैधानिक भएकाले जवाफ दिन अस्वीकार गरेको छ । अब एमालेको राजनीति कसरी अघि बढ्छ यही विषयमा हामीले...
प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रश्न : नेपाल-खनाल पक्षलाई पेलेरै जाने योजना हो ? (भिडियो कुराकानीसहित)
२९ फागुन २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गराएको सत्तारुढ नेकपा एमालेको पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको छ । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई जानकारी नै नदिई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले एकलौटी रुपमा प्रदेश इन्चार्जसहित केही मनोनयन...
बैठक नबोलाइएको भन्दै नेपाल-खनाल समूहको आपत्ति (भिडियो कुराकानी)
नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल समूहले दुईदिन यता छुट्टै छलफल गरिरहेको छ । स्थायी समितिका बहुमत सदस्यको बानेश्वरमा भएको बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलसँग हामीले छलफलको निष्कर्षका विषयमा कुराकानी गरेको छौं :
अब दुई वर्ष ओली सरकार बचाउन लागिन्छ, मेरो शुभकामनाः वरिष्ठ नेता खनाल (भिडियो कुराकानी)
२६ फागुन २०७७ काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओली सरकार कायम रहने नरहने संसदको जिम्मा भए पनि आफूहरु जोगाउन लाग्ने बताउनुभएको छ । एमालेको भूमिकामा फर्किएपछि खनालको प्रतिक्रिया आएको हो । अबको पालोमा संसद भवन नयाँ...
माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई सन्यास लिन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सुझाव (भिडियो कुराकानी)
माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई सन्यास लिन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सुझाव
पूर्व पार्टी ब्युँतिएपछि केही नेता समस्यामा, के भन्छन् मन्त्री थापा ? (भिडियो कुराकानी )
२५ फागुन २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि केही नेताहरु समस्यामा परेका छन् । तत्कालिन नेकपाको ओली समूहमा लागेका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु पनि अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । यसै सन्दर्भमा खानेपानी...